February 9, 2018 – Arakan Times
Zero point ရှိရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များအား မြန်မာအာဏာပိုင်များက လာရောက်ခြိမ်းခြောက်
AT Burmese9Feb 2018 Zero point ၌သြဂုတ်လ၂၅ရက်နောက်ပိုင်းမှစ၍ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များလာရောက်ခိုလှုံလျက်ရှိနေပါသည်။ ထိုနေရာသို့၉/၂/၂၀၁၈ခုနေ့နံနက်ပိုင်းတွင်မြန်မာအာဏာပိုင်များလာရောက်၍ဒုက္ခသည်များအားမြန်မာပြည်သို့ပြန်ရန်စည်းရုံးသော်လည်းဒုက္ခသည်များကငြင်းပယ်လိုက်ခဲ့ကြသည်။ တဖန်ညနေပိုင်းတွင်၎င်းအာဏာပိုင်များကပြန်လည်လာရောက်၍၎င်းနေရာ၌ရွှေ့ပြောင်းရန်အမျိုးမျိုးခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါသည်။အာဏာပိုင်အဖဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်သူများမှာ စစ်ဗျူဟာမှူး/တပ်ရင်းမှူး/တောင်မြို့မယက ဦးစီးမှူး/နယ်ခြားစောင့်ဒေသမှူးစသည့်များပါရှိသည်။ Zero point ရှိဒုက္ခသည်များစိုးရိမ်ကြောင်း AT Burmese သို့ပြောပါသည်။
Rohingya loaded boat sinks in Naf-river,3dead bodies recovered
February 9, 2018	Leaveacomment 178 Views
February 9, 2018 AT Correspondent, Teknaf A Rohingya loaded engine boat from Myanmar to Bangladesh sank in the Naf-river on (Thursday) February 8, 2018. The accident occurred on Thursday in the Naf-river where the local Bangladeshi people recovered3dead bodies of children at dawn. The deceased were identified as Omar Salma (4 month old), son of Yasin, Mohamed Ayoub ...
မောင်တောမြို့၊ ရှေးဟောင်းဗလီ ဖျက်စီးခံရ။
February 9, 2018	Leaveacomment 425 Views
AT Burmese9Feb 2018 မောင်တောမြို့နယ် ဥဒေါင်းကျေးရွာအုပ်စု အနောက်ရွာက နှစ်ပေါင်း ၂၇၆ သက်တမ်းရှိ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ကို ၂၀၁၈၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၆) ရက်နေ့မှာ မြန်မာ့လက်နက်ကိုင် အာဏာပိုင်များနဲ့ ရခိုင်အစွန်းရောက်များပူးပေါင်းကာ ဖျက်စီးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ကို ၁၇၄၂ ခုနှစ် – လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၇၆ တွင် နော်ဇူမာလိခ် ဆိုသူက မိမိကိုယ်ပိုင်မြေတွင် ဆောက်လုပ် လှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အီစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနေထိုင်လာတာ ရာစုနှစ်များစွာရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သက်သေတခုပါ။ ယခုလို နှစ်ရှည် ရှေးဟောင်း သမိုင်းဝင် ဗလီကို ဖျက်စီးလိုက်ခြင်းဟာ ရိုဟင်လူမျိုးများ၏ သမိုင်းကို ဖျောက်ဖျက်လိုသော ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူရှေးဟောင်းဗလီများ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖျက်စီးခံခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာ့စစ်အစိုးရလက်ထက်ကပင် ယနေ့ချိန်ထိ မြန်မာအစိုးရဟာ ရိုဟင်လူမျိုးများကို ခွဲခြားဆက်ဆံကာ ...